चीन फैब्रिक सामाग्री लेबल, अनुकूलन कपडे लेबल थोक - क्रिस्टल कोड प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
हाम्रो सुन्दर अनुकूल कपडा लेबलहरू नरम, डबल रेश्मी सुन्तन र रेशमी चिकनी बनावट संग, उच्च परिभाषा संग अमीर रंग संग मुद्रित। हाम्रो पूर्ण रंग कपडा लेबल साना व्यवसाय र स्टार्टअप को लागि आदर्श छ किनकि हाम्रो कुनै न्यूनतम आदेश छैन। तपाईं शिल्प परियोजनाहरू र हस्तनिर्मित बुना भयो वस्तुहरूको लागि आफ्नै कपडा लेबलहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन डिजाइन गर्न सजिलो, त्यसैले तपाईंको ब्रान्ड नाम वा लोगोसँग आफ्नै कस्टम सिलाई लेबलहरू छाप्नुहोस्। हामी तपाईंको ब्रान्डको लागि पूर्ण रंग व्यक्तिगतकृत सिलाई नाम नाम लेबलहरू प्रिन्ट गर्छौं। तपाईंको ब्रान्ड कपडा लेबलको साथ तपाईंको ब्रान्ड बनाउनुहोस्।
धेरै लेबल कम्पनीहरु उच्च गुणस्तर, पवनत्व र प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण।
ठूला कम्पनीहरू जसले तपाईंलाई जित्छ र आफ्नो कामलाई आवश्यक पर्दैन। गुणस्तर प्रदान गर्न कौशल वा उपकरण बिना सानो पसलहरू, समयको व्यापारमा। यो प्रतिज्ञा सामान्यतया बीचमा हराइएको हुन्छ।
क्रिस्टल कोड कस्टम मुद्रित फैब्रिक लेबल, बुना लेबल, ह्याङ्ग ट्याग, र लेग स्टिकर (दबाव संवेदनशील लेबल) को एक उत्कृष्ट स्रोत हो।
तपाइँका आवश्यकताहरूमा निर्भर छ, तपाईं विभिन्न प्रकारका आकार र सामग्रीबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी तपाईंको सबै लेबलिंग आवश्यकताहरु को लागी सामग्रियों को घर इन्वेंट्री मा ठूलो लेछन।
कपडा सामग्री लेबल
एक व्यावसायिक स्पर्श थप्नका लागि हाम्रो अनुकूलन लेबल लेबलहरू र ट्यागहरूसँग तपाईंको उत्पादनहरू लेबल गर्नु आवश्यक छ। व्यापारहरू एक आकर्षक र परम्परागत निजीकृत लेबल बनाउने कपडा वा सामानहरूमा राख्नु भएको छ जुन तपाईले बेच्न योजना बनाउनु भएको छ, र ठूलो मूल्यमा सानो मात्राको आवश्यकता पर्दछ, त्यसपछि हामीसँग आवश्यक लेबल छ!
व्यवसाय स्वामित्वको लागि रोमाञ्चक मार्ग सुरू गर्दा, विचार गर्न र योजनाको लागि धेरै चीजहरू छन्। चाहे तपाईं एक समयमा आफ्नो हस्तनिर्मित वस्तुहरू बनाउनुहुन्छ वा तपाईं सानो निर्माता हुनुहुन्छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ कि बजारमा पछाडि तपाईंका समाप्त उत्पादनहरू पेशेवरहरू हेर्छन्। यो मेरो हो! गुणस्तर प्रदान गर्दछ अनुकूल कपडा लेबलहरू तपाईंको आवश्यकताहरू अनुरूप गर्न ठूला र सानो मात्राहरूमा।